Tinc una mazita akawanda emahofisi ekunyora mazita evitar vasina kumbobvira vatenga chinhu aquí? Munguva ichangopfuura, ndakanga ndichitaura nevamwe vashoma vehama dzangu dzeblogger evita vari vatsva mumutambo wekugadzira mabhuku uye vakandibvunza kuti ndeipi ma email ambandishandisa kana mumwe munhu achinyora tsamba yangu yekunyora.
Ini chaizvoizvo ndine mamwe emaii chaiwo andinotumira kana munhu anonyora aripo, anosi mazita, nezvimwe zvakadaro. Ndinotenda idzi emaimeri dzinoshanda kushandura vanyoresa kuva vatengi. Correu electrònic de correu electrònic de Izvi zvinonzi kutangisa. Mamwe masayiti anotumira email yekutengesa kana mumwe munhu akaisa chimwe chinhu mumotokari yekutengesa ndokubva asiya zvakare.
Vanyoreri vako vari panet kutofarira zvaunofanira kupa uye zvaunofanira kutaura. Rako runyorwa rwekutumira runotariswa zvikuru nekuti rwunogadzirwa nechaunga chinangwa chako. Usatarisa junt vakanyoresa paunenge uchironga kushambadzira kwako.
Mukuwedzera, iwe watova nehumwe ruzivo rwakasiyana nezvevaya vanogona kutengesa. Unogona kunge wakaunganidza mazita evita, correu electrònic, nzvimbo uye pamwe zuva rekuberekwa kana yegore, semuenzaniso. Kana iwe ukashandisa tsamba yekutsvaga sarudzo inofanana MailChimp, iwe unogonawo kuona Angaswera ivo vari kuzarura uye iyo inoshamwaridzana mukati mavo vari kutarisa. Devesh kubva kuWP Kube inovhara 11 plugins yaungashandisa kuunganidza panell maimeri lloc WordPress uye ndinofunga kuti kuverenga kwakanaka kune evit vanofarira. Ruzivo rwese urwu runogona kuongororwa uye kushandiswa kune mukana wako kushambadzira.
Zvisinei isu hatisi kutaura pamusoro pemashandisi kana mabheji kuti atungamirire mimwe mitungamiri nhasi. Panzvimbo pezvo tiri kutarisa pamudzi wepi neipi yemushandirapamwe email – ma email.
1.4 Carta d’aniversari
2 Nyaya Emails
3 Estudis de cas
3.2 Botiga de moda
3.3 SmartPak equí
Ma sampuli ari pazasi anofanirwa kukupa iwe pfungwa dzemhando dze mavara iwe dzaunotumira junt vako vanyoreri kuti vavakurudzire mukuita uye nekuvashandura kuva vatengi. Ramba uchifunga kuti iyo yekutumira runyorwa sevhisi yaunoshandisa ichave iine chaiyo yekukodha iwe yaunofanirwa kuisa kuti ushandise zita remunyore kana zvimwe zvinongedzo.
Sekukutendai nekubhadhara, pasi apa panel lapse iweguva yaunogona kushandisa ku15% kubva chero ipi zvayo kutenga web XYZ. Comanda pa, chendisa kero code chete: XYZ
Wakave nemukana wekutarisisa mutsara wedu mutsva we [kuzadza chibereko]. Tinoda vose vatinyoresa uye vasingatendi uye vanoda kukupa pachena kutumira pamutengo wako unotevera. Chete de purogiramu Ingoshandisa: XYZ
Kana uchida kuzonyorazve tsamba yetsamba panell imwe nguva inotevera, ingoenda kune yedu peji peji uye tinya pane "Nyorera" bhatani.
Kungofanirwa chiyeuchidzo chekubatsira kuti yako zvisizvo zve15% kubva chero ipi zvayo yekushandisa inopera [zuva rokupera kwekupedzisira pano]. Kurumidza! Iwe unenge uchinge wava nenguva yekushandisa zvakanakisa nezvechipo ichi chinokosha.
Feliç aniversari de XYZ.com! Tinovimba une zuva rekuzvarwa rinofadza. Kuti tikubatsire kupemberera, tiri kukupa iwe yemahara [zadza zvisina chinhu] nechero rekuwedzera pamwe nekutakura kwemahara.
Silverpop inoshuma kuti maererano NeConsultancy al Regne Unit per correu electrònic Estadístiques de màrqueting, reduït al 52% de les xinyoresa simultània i simultània vachitarisira kugamuchira purogiramu yekubvisa kana kupikisa.
Apa ndipo panowanikwa maikeri per correu electrònic. Nenguva iyo mutengi anonyora tsamba yako yekunyora, anofanira kutanga kutora mutsamba emaimeri kubva kwauri. Iko email yakagamuchirwa inopupurira kuti iye zvechokwadi akanyoresa mazita ako emahofisi. Iwe unogona kunge uchida kutevera nekutengesa kunopa kubhadhara pachena kana mari iri kure.
Mukuwedzera kune maeemail, unogona kutumira zvikwata zvakakosha kana uine kutengesa, zororo rezororo uye zuva rekuberekwa uye chiitiko chekuyeuka zvakanyanya kune evita vatengi vane zuva rekuberekwa kana remhemberero mumwedzi wakapiwa.
Pamusoro peemail aya, iwe nonofanirwa kutumira email yekuyeuchidza nguva nenguva. Semuenzaniso, kana iwe wakapa mutengo wekusaina uye nguva yekupera yava kusvika, yako autoresponder inofanira kutumira email iyo yakakonzeresa kana munhu wacho asina kushandisa kodhi yake yekutaura.
Kana zvasvika pakubudirira kwemashoko donaambani ekutengesa, panell mabhizinesi akawanda anoita izvi zvakanaka chaizvo. Kudzidza maitiro evita kunogona kukubatsira kuti uuye neemaepi ako kuti utumire kune vanyori vako.
Econsultancy akatarisa LV = ‘s yekutumira tsamba uye zvavari kuita chaizvo. LV = ikambani yeinishuwarenzi. Zvinangwa zvavo zvaive zvekuvandudza vatengi rapport uye kuwedzera vatengi vatsva vanotenga inishuwarenzi en línia. Maemail aya airatidzirwa maererano nerudzi rweinishuwarenzi rwainyoreswa rwaida kutenga uye pavaive vari kuda kwavo kutenga inishuwarenzi.
Somuenzaniso, kana mutengi akasiya kutsvaga mongusarudza rudzi rwehutano rwehushuwarisi, emaimeri acho angave akasiyana pane kana mutengi achangotarisa zvaivepo.
Zvimwe zvezvinhu LV = zvakaitwa ndezvekuita kuti e-mail iine mazita, tsanangudzo pamusoro pemutemo iyo mutengi aitarisa uye achipa nzira dzekutengesa kutengesa, zvakadai sekufambisa inshuwarisi, kumba yveshuwaram uhawyamuyawyamuyamawyamahyamahyamahawan.
Migumisiro yacho yaisanganisira zvinodarika 50% kuwedzera muzana rakazaruka uye 41,83% kuwedzerwa mukukwira kwepamusoro. Mukuwedzera, kutendeuka kwenhamba kwakakwira kusvika ne20%.
Canopy Labs vakatarisa Chitoro Chemafashoni, Chavasina Mazita Chaiwo. Chitoro chemafashoni chakawedzera kuwedzera kupfuura 5 anys de muna shanduko mushure mekushandisa email email chikamu.
Màrqueting Xerpa acatarisa maeamèrica i acceptayana-signant amb intel·ligència intel·ligent i equina. Iko kambani inotumira dzimwe mail email zvakananga ane zviitiko zvinoshamisa. Vanenge vakakomba 40 emaimeri akasiyana-siyana atinotumira panguva dzakasiyana-siyana.
Izvi zvigadziriswa zvifananidzo zvose zviri mauto uye mabhuku donawikwi ezvinyorwa. Nhamba yakasununguka inotarisana ne28% uye kutendeuka kwehuwandu i11%.
Somuenzaniso, vanotumira mavhitamini nevatengi mapepa junt vatengi vane mabhiza. Panenge mazuva 11 vasati vatengesa SmartPak kutumirwa, menut anotumirwa chiyeuchidzo. Izvi zvinoita kuti mutengi azive apo SmartPak ichasvika ndokumupa iye mazuva mashomanana kuti aite chero shanduko kana kuwedzerwa kune chirongwa.
Correu electrònic kutaurirana ndeimwe yemhando shoma dzinodhura dzekushambadza iwe uchaitira bhizinesi rako. Kana iwe uchinge wagadzira yako yekutanga tsamba dzeemail, iwe unofanirwa kukwanisa kungozvinyora muzita uye kutumira kunze mumabatch sezvinodiwa. Kunyangwe kutendeuka kwako kuchikwira nechero mashoma muzana, izvo zvinogona kukonzera yakakwira yekutengesa vhoriyamu uye zvinoreva mutsauko uripo pakati site web yako kubudirira kana kukundikana.